International Rail Industry Show Fair ka ana-ebu ya oge izizi na Eskisehir | RayHaber
HomeTurkeyCentral Anatolia Region26 EskisehirIhe ngosi ahia nke International Rail Show Show Ga-adịrịrị na nke mbụ na Eskişehir
20 / 11 / 2019 26 Eskisehir, Central Anatolia Region, ụgbọ okporo ígwè, eme, General, Isi akụkọ, Turkey
ụlọ ọrụ ụgbọ elu mba ụwa na-egosi ngosi ga-eme na Eskisehir na nke izizi
Ngosi uzo ugboala, ihe nlere nke ugboala na teknụzụ ngosi, nke a ga-ahazi site na Flọ Ọrụ Ọhụụ na nkwado nke Ministry of Transport and Infrastructure, na ụbọchị 14-16 Eprel 2020 na Eskişehir, nke bụ obi ụzọ ụgbọ oloko obodo anyị yana yana ụlọ ọrụ ụgbọ okporo ígwè.
Ọgụgụ ahụ amalitela maka ihe ngosi Rail Industry Show, Railway Industry Infrastructure and Technologies Fair, nke na-ezube ime ka ndị nnọchi anya gọọmentị na nke onwe nke ngalaba okporo ụzọ mba ụwa gbakọta. 14-16 Site na nkwado nke Ministri Ingbọ njem na akụrụngwa, a haziri ngosi ahụ na Eprel 2020 ya na nzukọ nke Fuarcılık nke oge a, ụlọ ọrụ guzobere na 100% ụlọ na isi obodo. TCDD Transportation Co., Ankara Chamber of Industry, Eskişehir Chamber of Commerce, DTD Railway Transport Association, Rail Systems Association na Eskişehir Chamber of Industry so na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-akwado ihe omume ahụ. E gosiputara ngosi a, nke ejikere site na ntinye nke ulo oru ndi ozo n’anu ulo na nke ndi mba ozo si na mba 15 na ihe kariri otu puku ndi obia site na 100, gha eweputa ihe ndabere maka iguzobe ndi ahia ohuru, iwulite mmekorita ahia di ugbua na ime nkwekorita ohuru. Railway ọrụ na ndị ụgbọ akụrụngwa na Turkey na ụwa, superstructure, technology, nche, electrification, egosi na IT sịrị, nakwa dị ka ìhè okporo ígwè na usoro Okporo ígwè Industry Gosi, ga-ewetara ọnụ Nsukka. Ndị SME na-emepụta ụdị ọrụ dị elu ga-enwekwa ohere ịme onwe ha ka ngosi a ma meghee ụwa.
Beforebọchị tupu echi ahụ, a ga-enwe ọgbakọ iji kpaa maka okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè na ọrụ nkwenkwe ụgha dị iche iche, ụdị ego, usoro ego na usoro ịnye ego maka oru ngo. N’ọgbakọ a, a ga-ekwu maka akụrụngwa maka ụzọ ụgbọ okporo ígwè na ọrụ nkwenkwe ụgha, ụdị ego, ihe enyemaka ego. Mgbakọ a ga-agụnye ndị na-ahụ maka akụ na ndị na-ahụ maka ego, ndị nnọchi anya gọọmentị obodo na nke ndị si mba ọzọ, ndị gọọmentị ime obodo, nyocha ọrụ, mkpuchi na ụlọ ọrụ iwu. Dabere na arịrịọ ahụ, a ga-ahazikwa nzukọ maka imekọ ihe ọnụ. N ’ogbako a, a ga-enwe nzukọ izizi n’otu oge n’otu a ga-enwe, ebe a ga-ekwurita isiokwu ndị akọwapụtara nke ngalaba ahụ.
Nanị Mpụga Ntugharị nke ngalaba Railway Eskişehir
Nke a bụ oge mbụ a na-ahazi ihe omume dị otú ahụ maka ngalaba ụgbọ okporo ígwè na Eskişehir, nke bụ ntọala dị mkpa maka okporo ụzọ ụgbọ elu ma ọ bụ naanị awa ole na ole ka Ankara na nnukwu obodo ndị ọzọ.
Metin Güler, Onye isi oche nke şlọ Ọrụ Eskişehir, kwuru na Railway Fair dị ezigbo mkpa maka Eskişehir Fair Congress Center na Eskişehir: “Eskişehir nwere uru mpaghara na ọdịnala ogologo nke azụmahịa na ụlọ ọrụ. Maka nke a, ọ bụ otu n’ime obodo na-ewetara obodo anyị uru. ETO TÜYAP Fair Center na Vehbi Koç Congress Center, nke dịkwa na Eskişehir Fair Convention Center, nke anyị mezuru n’oge na-adịbeghị anya malitere ịmalite iji bulie ike asọmpi nke obodo anyị. N'ezie, agba ọ bụla dị ezigbo mkpa maka mmepe akụ na ụba. ETO TUYAP Fair Center rụọ, ụlọ ọrụ ndú na Turkey TUYAP Fair, malitere ịhazi fairs na àgwà nke ndụ ọtụtụ dị iche iche ndi.
Otu n'ime ihe kachasị mkpa mere ụlọ anyị jiri kpebie itinye ego na Eskişehir Fair Congress Center bụ obi abụọ adịghị ya na ụlọ ọrụ ụgbọ oloko. Ministri mmepe, nyochara akụkọ ga-ekwe omume anyị kwadebere maka etiti ahụ, nyere anyị nkwado kachasị maka obodo Anatolia. Ihe omuma dabere na akuko odi nma bu otutu ihe ndi Eskişehir nwere. Achọpụtala ikike nke ụzọ ụgbọ okporo ígwè, ọdụ ụgbọ elu yana ụyọkọ ọrụ dịka otu n'ime ebumnuche kachasị mkpa nke ụlọ ọrụ ngosi ziri ezi a ga-eme na Eskişehir. Chamlọ anyị arụwo ọrụ ike dị ukwuu iji hazie ngosipụta pụrụ iche maka mpaghara ụzọ ụgbọ oloko na n'ihi ya, Modern Fuarcılık A. Modern. Họrọ. Dị ka TÜLOMSAŞ, otu ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ya bụ ndị sụworo ụzọ ọgbara ọhụrụ nke ala anyị, ebe naanị ụzọ gafere ụzọ ụgbọ oloko n'obodo anyị dị na Eskişehir, ọ bụ nsonaazụ ebumpụta ụwa na a na-enwe ngosi ụgbọ okporo ígwè na Eskişehir. N'echiche a, ụlọ anyị ga-aga n'ihu na-akwado mpaghara a dị mkpa ma tinye ego na mmepe nke ụlọ ọrụ okporo ụzọ, nke ga-enyere aka na mmepe akụ na ụba obodo anyị na mba anyị. ”
Illọ Ọrụ Rail na-egosi 14-16 na Eprel 2020…
Africa na Middle East nye ibe ha nnukwu itinye ego ha…
Were ebe gị na Middle East & Africa Rail Show
Middle East & Africa Rail Show na Cairo na Ọktọba…
CYF International ọzọ na Eurasia Rail 2017
Nzukọ ụgbọ oloko mba ofesi B2B…
23 Eprel International Ememe inmụaka na Kocaeli…
4 na KBU. International Rail Systems Engineering…
Ationzọ ationgbọ njem Trans-Caspian…
T-Roc Cabriolet ọhụrụ maka oge mbụ na Frankfurt
E mepere Izmir International Fair 88 maka K
Izmir Port ga-edozi ya site n'ọdụ ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri
ụlọ ọrụ ụgbọ okporo ígwè
Zọ Mkpuchi ilgbọala njem na teknụzụ
Nleba ilgbọ oloko
Ihe Ngosi Banye Banye Banyere Mba Nile